Semalt: Sei Kuronga Kwewebhu Kunogona Kufara?
kubva pawebsite dzakawanda uye kuzvichengeta mumafaira avo. Maererano neHartley Brody (munyori weIndaneti Guru reWebra Scraping), mutambi webhutori uye mutungamiri wekambani, web scraping inogona kuva chiitiko chinonakidza uye chinobatsira. Hartley Brody akachera zvinyorwa zvakasiyana-siyana kubva kune mawebsite akawanda, akadai semimhanzi blogs uye Amazon.com. Nokubudirira kwake, akanzwisisa kuti chero chero webhusaiti yega yega inogona kuiswa - csf webmin. Izvi zvinotevera zvikonzero zvakakonzera kuti kubvisa webhutori kunogona kuva chiitiko chinonakidza.
maIndaneti ari nani kupfuura APIs
Kunyange zvazvo mawebsite akawanda ane API, ane zvakawanda zvisingakwanisi. Kana iyo API inopa ruzivo rwehuwandu hwemashoko ose, vatsva vewebhu vanofanira kuomerera kumitengo yavo. A webhusaiti yaizochinja ku webhusaiti yavo, asi kuchinja kwakafanana muurongwa hwe data hucharatidza mumazuva API kana kunyange mwedzi gare gare. Asi vatengesi vepamusoro vanogona kubatsirwa zvakawanda nokuda kweAAPIs. Semuenzaniso, nguva dzose pavanopinda mune imwe nzvimbo (yakadai se Twitter), mafomu ekuisa mazita ose anogadzirirwa ne APIs. Ichokwadi, iyo API inotsanangura nzira iyo imwe purogiramu yepurogiramu inopindirana nemumwe.
Mabhizimisi Usashandisa A Lot Of Defenses
Tsvakurudzo dzewebhu dzinogona kuedza imwe nzvimbo kune imwe nguva, isina matambudziko. Nhasi makambani akawanda haana simba rakasimba rezvidziviriro kuchengetedza nzvimbo yavo nehuwandu hwekuwana..
Nzira yeiyo yekutsvaga nzvimbo yeSyra
Chimwe chezvinhu zvokutanga kutsvakurudza webhu ndechekugadzirira zvose zvese zvavanoda mune imwe nzira. Zvose basa racho rinoitwa nemutemo unonzi 'scraper', iyo inotumira mubvunzo kune imwe nzvimbo yewebhu. Zvadaro, inoparadzanisa gwaro re HTML uye kutsvaga ruzivo rwakananga.
Nhamba dzepaIndaneti Inopa Nzira Yakanakisisa Yokufamba
Kufamba nenzira isina kuumbwa API kunogona kunge iri dambudziko rakaoma, uye rinogona kutora maawa. Mazuva ano mawebhusayithi ane chigadziro chakachenesa, uye anogona kutapudzwa nyore nyore.
Kuwana Izvo Zvakanaka HTML Parsing Library
Hartley Brody anongotanga kuita zvimwe zvitsvakurudzo kuti awane yakanaka HTML parsing raibhurari mumutauro wavanosarudza. Somuenzaniso, vanogona kushandisa Python kana Soup Beautiful. Anotaura kuti vatengesi vari muIndaneti vari kuedza kubvisa zvimwe zvido zvekutsvaga kuwana URLs kukumbira uye zvinhu zveDOM. Zvadaro makirasiyuta anogona kuwanikira ivo vose ruzivo rwemhuri.
Zvose Zvitsuwa Zvinogona Kutorwa
Vazhinji vanotengesa vanodavira kuti mamwe mawebhusayithi haagoni kukanganiswa. Asi izvi hazvisi chokwadi. Ichokwadi, chero webhusaiti yega yega inogona kuiswa, kunyanya kana inoshandisa AJAX kuitira kuti itakure data, inogona kupedzwa nyore nyore.
Kuunganidza Izvo Zvakanaka Dhiyabhorosi
Vashandi vanogona kuwana nekutsvaga zvinhu zvakawanda kubva pawebsite dzakasiyana-siyana. Vanogona kutevedzera dhiyabhorosi kuti vazadzise basa ravo nekungogara kubva kune kombiyuta yavo.
Zviitiko Zvikuru Zvokufunga Nezvekugadzira Webhusaiti
Mawebsite akawanda nhasi haabvumi kuti webhutwe. Somugumisiro, vatsva vewebhu vanofanirwa kuverenga Mitemo neZvimwe zveimwe nzvimbo kuti vaone kana vakabvumirwa kuti vaende. Vanofanirawo kuziva kuti mamwe ma webhupu anoshandisa software inomisa web scrapers. Panewo mamwe mawebhusayithi anotaura pachena kuti vashanyi vanoda kuisa mamwe makiki kuti ave nekuwana.